देउवा सरकारको पालामा पेट्रोलको मूल्य बढ्दा सडकमा अाेर्लने अनेरास्ववियु कता ? – Online National Network
देउवा सरकारको पालामा पेट्रोलको मूल्य बढ्दा सडकमा अाेर्लने अनेरास्ववियु कता ?
२१ जेष्ठ २०७५, सोमबार १६:१९
काठमाडौं, २१ जेठ – नेपाली राजनीतिको तीतो यथार्थ यस्तो छ कि भातृसस्थाका कार्यकर्ताहरु विपक्षी दलका हुनासाथ चिच्याएर भुकम्पै ल्याउँला जस्तो गर्छन् । तर आफ्नो पार्टी (बाम गठबन्धन)काेे सरकार भएका बेलामा जस्तासुकै गल्तीलाई पनि नदेखेजस्तो गर्छन् ।
प्रसंग हो विघटित नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुकी पूर्व अध्यक्ष नविना लामाको । उनी अहिले एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अन्डरलाइन (नेकपा)को केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद समेत भएकी छिन् ।
पार्टीले ३३ प्रतिशत महिलालाई केन्द्रीय तहमा नराखेको भन्दै निर्वाचन आयोगले दर्ता समेत गरेको छैन् । तिनै नविना लामा उनले यो सरकार अहिलेसम्मकै सबल र हालै जारी गरिएको संघीय बजेट सबैभन्दा उत्तम भनिसकेकी छिन् । तर सांसद लामालाई प्रश्न– के मूल्यवृद्धि गर्ने सरकारलाई केही सुझाव छैन ? नविना र मूल्यवृद्धिबीचको साइनो के ?
उनले त्यतिबेला देउवालाई अपशब्द नै बोल्दाै उनले कमिशन खाने उद्धेश्यले हप्तैपिच्छे मुल्यवृद्धि गरेको आरोप पनि लगाइन् । तर अहिले आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ५ पटकसम्म मूल्य बढाउँदा उनी वेपत्ता जस्तै छिन्। उनले एक शब्द पनि बोल्न अावस्यक ठानेकी छैनन्।